भेट्रान जिद्दीहरूको भिडन्तमा रहलपहल अपेक्षा
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिभेट्रान जिद्दीहरूको भिडन्तमा रहलपहल अपेक्षा
कन्टिर–बाबू अझै पनि मानिसका व्यावहारिक प्रकारका बारेमा कुनै धारणा बनाउन असहज महसुस गर्छन् । उनलाई लाग्छ, कोही–कोही मानिस बडा अजिबका हुन्छन् । बडा जिद्दी । त्यस्ता व्यक्तिहरू नयाँ ढङ्गले समाज रूपान्तरण र नवनिर्माणका दिशामा क्रियाशील हुने आकाङ्क्षा राख्छन् । यसो गर्दा उनीहरू व्यक्तिगत लाभ–हानिको ख्याल गर्दैनन् । ज्यानको मोह–माया राख्दैनन् ।
कन्टिर–बाबूका अनुसार सदाबहार सत्याग्रही गोकेसी त्यस्तै एक अजिब व्यक्ति हुन् । आफ्नो अडानमा अडिग गोकेसीलाई राज्यको शक्तिले कहिल्यै पनि डगमगाउन र लोभ्याउन सकेन । गोकेसीले पुनः तीन साताको म्याद दिँदै पुनः आमरण अनशन बस्ने कुरा बताएका छन् । उनको यो ताजा घोषणासँग विभिन्न क्षेत्रमा पराकम्प गएको छ । पराकम्पित हुनेमा सरकारी पक्ष र पक्षधरहरू अग्रपङ्क्तिमा छन् ।
वास्तविक सत्याग्रहीलाई सायद जनताका पक्षमा राखेको अडानका आधारमा शक्ति प्राप्त हुने गर्छ । कन्टिर–बाबू उनको अडानबाट अत्यन्त प्रभावित छन् र उनलाई सम्मान गर्छन् । कन्टिर–बाबू प्रायः अरूलाई निर्विवाद रूपमा सम्मान गर्ने सन्दर्भमा बडो जोखना हेर्ने गर्छन् । तर गोकेसीका सन्दर्भमा भने कुनै जोखना हेर्नुपर्ने आवश्यक ठान्दैनन् ।
यता हाम्रा ओल्बा उही ड्याङका मूला हुन् । उनी न गोकेसीको बारेमा सोच्छन्, न कन्टिर–बाबूको बारेमा सोच्छन्, मात्रै आफ्नै बारेमा सोच्छन्, जुन तरिकाको तारिफ कम जगहँसाइ बढी भइरहेको कन्टिर–बाबूलाई थाहा छ ।
ओल्बा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा हुने लाभ र हानिका आधारमा मानिसको मूल्याङ्कन गर्छन् । उनलाई समग्र समाज, देश र जनताको कल्याण एवम् हित सम्बन्धमा खासै मतलब छैन ।
यतिबेला फेरि एक पटक दुई फरक–धारका जिद्दी भेट्रानहरू भिडन्तमा उत्रिने भएका छन् । एकातिर गोकेसी, अर्कोतिर ओल्बा । एक विधिको पक्षधर, अर्को व्यक्तिको पक्षधर । एक प्रकारले यो दीर्घ-चिकित्सक र दीर्घ-रोगी बीचको भिडन्त जस्तो देखिने टिप्पणी पनि कन्टिर–बाबूले सुनेका छन् ।
आखिर भिडन्त जुनसुकै पात्र र प्रवृत्तिको होस्, कन्टिर–बाबूलाई थाहा छ– अन्तमा जित सत्यकै हुन्छ । त्यति हो बीचमा भिडन्तको दृश्य कस्तो हुन्छ ? कुन रूपमा अघि बढ्छ ? त्यो हेर्न भने कन्टिर–बाबू निकै जमजमाइरहेका छन् ।
यतिमात्र होइन, हाम्रा ओल्बा अरूभन्दा एक कदम अघि बढेर उनलाई चित्त नबुझेका विभिन्न व्यक्तिलाई नानाभाँती उपाधि बाँड्दै देश दौडाहामा छन् । अजासु, बाजे, नर्कवासी, केटो आदि–इत्यादि । यतिबेला ओल्बाको एकल इजलासको त्यही सूचीमा गोकेसीको पालो–पेसी चढेको छ । माघ २३ गते नारायणहिटी गेटअगाडि हुने ‘कहीँ नभएको जात्रा’मा ओल्बाले निश्चय पनि गोकेसीतिर फर्केर तारो हान्नेछन् ।
कन्टिर–बाबू थाहा पाउन प्रतीक्षरत छन्, ओल्बाले ‘जात्रा’मा गोकेसीको नाम किटेर के पदवी दिने हुन्, कुन उखान सुनाउने हुन् ? बुढो–मदारी, केसी कि बेसी, यायावर, तालु, असफल डा वा त्यस्तै केही नयाँ चिज ओल्बाको मुखबाट फुत्त बाहिर निस्किनेछ । त्यसमा रमितेहरूले पेट मिचीमिची निकैबेर ताली बजाएको हेर्न पनि कन्टिर–बाबू प्रतीक्षारत नै छन् !
गोकेसी पराकम्प भेट्रान जिद्दी